ကိုဗစ်(၁၉)ရောဂါလက္ခဏာတွေ ခံစားလာရရင် ဘာတွေလုပ်ရမလဲ
ဦးစွာကိုဗစ်(၁၉)ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကို ဦးစွာပြောပြပေးလိုပါတယ်။လက္ခဏာတွေကတော့အဖျားရှိလာတာ၊ ချောင်းဆိုးတာ၊အသက်ရှုမ၀တာ၊အသက်ရှုခက်ခဲတာ၊အားအင်ကုန်ခမ်းတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ကနဦးမှာတော့ ကိုယ်အပူချိန်မြင့်တက်လာပြီး ချောင်းခြောက်ဆိုးလာတတ်ပါတယ်။တစ်ပတ်အကြာမှာတော့ အားအင်ကုန်ခမ်း ပြီးအသက်ရှုကြပ်တာတွေဖြစ်လာမှာပါ။
ဇွန်လ ၂၀ ရက်၊ ၂၀၂၀၊ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ ။	။ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း စမတ်ဖုန်း အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သော OPPO မှ “Shine Up Your A-Moment” ဟူသော ဆောင်ပုဒ်နှင့် အတူ အတောက်ပဆုံး အခိုက်အတန်းများနှင့် စိတ်ကျေနပ်ဖွယ် စမတ်ဖုန်း အတွေ့အကြုံများကို ပေးစွမ်းနိုင်မည့် OPPO A92 ကို မြန်မာနိုင်ငံစျေးကွက်သို့ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ OPPO A92 တွင် ကြီးမားကောင်းမွန်သော 1080P Neo-Display၊ စွမ်းဆောင်မှု ကောင်းမွန်သည့် AI Quad Camera (၄) လုံးတို့နှင့် 8GB RAM + 128GB ROM ပါဝင်ပြီး ဝင်ရိုးစွန်းရှုခင်းမှာ တောက်ပနေတဲ့ ကြယ်တာရာအသွင်ဆောင်တဲ့ အော်ရိုရာ အလင်းတန်းသဖွယ် Aurora Purple (ခရမ်းရောင်ပြေး) နှင့် ဝင်ရိုးစွန်းည ကြယ်အစုအဝေးကဲ့သို့ တင့်တယ်သော Twilight Black (အနက်ရောင်) တို့ကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
realme6နှင့် realme6Pro စမတ်ဖုန်းသစ်များ မေလ ၁၆ ရက်နေ့တွင်စတင်ဝယ်ယူနိုင်မည်
realme သုံးစွဲသူများအတွက် Flagship Level အတွေ့အကြုံကောင်းများရရှိစေမည့် realme6နှင့် realme6Pro စမတ်ဖုန်းသစ်များကို လက်ဆောင်များနှင့်အတူ မေလ ၁၆ ရက်နေ့မှစတင်ဝယ်ယူနိုင်မည်။
လူငယ်ကြိုက် Selfie အသားပေး VIVO စမတ်ဖုန်းသစ်ကို ပြည်တွင်း၌ စတင်မိတ်ဆက်
ဖက်ရှင်စိတ်ဝင်စားသည့် လူငယ်များနှင့် Selfie ရိုက်ကူးမှုကို နှစ်သက်သူများအတွက် အထူးရည်ရွယ်ထားသည့် Vivo ၏ V19 အမျိုးအစား Flagship ဖုန်းသစ်ကို ပြည်တွင်းဈေးကွက်အတွင်း စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း Vivo Mobile Myanmar ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။
realme6နှင့် realme6Pro တို့ ထွက်လာရန် အသင့်ဖြစ်နေ
ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ CPU၊ ပိုမိုသာလွန်တဲ့ 90Hz Display၊ ပိုမိုအရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ 64MP ကင်မရာ၊ ပိုမိုမြန်ဆန်တဲ့ 30W Flash Charge အားသွင်းစနစ်တို့ပါဝင်တဲ့ realme6series စမတ်ဖုန်းသစ်တို့ကို ပိုမိုသက်သာသည့်ဈေးနှုန်းများဖြင့် လာမည့် မေလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် တရားဝင်မိတ်ဆက်ကြေညာပေးသွားမည်။
Dual Selfie ကင်မရာနဲ့ Super Night Mode ပါဝင်တဲ့ VIVO-V19 ကို မေလ ၈ ရက်နေ့မှာ မိတ်ဆက်မယ်
Selfie ကင်မရာစွမ်းဆောင်ရည်မှာ ဆန်းသစ်မှုတွေအမြဲတီထွင်ဖန်တီးလေ့ရှိတဲ့ VIVO ကနေပြီး ထူးခြားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည် တွေနဲ့ စမတ်ဖုန်းသစ်တစ်မျိုးကို မိတ်ဆက်ပေးသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။
ဝိတ်ချတဲ့အခါ အားဆေးသောက်သင့်ရဲ့လား ?
ဝိတ်ချတဲ့အခါ အားဆေးသောက်သင့်ရဲ့လား ? ဒေါက်တာ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အဟာရဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်)
ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေနဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို မြင့်တင်ကြမလဲ ?
COVID-19 ကို အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီး ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ ?
အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး၏ ပြောကြားချက်
မတ်လ ၁၆ ရက်၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ ။	။ ကမ္ဘာထိပ်တန်း စမတ်ဖုန်း အမှတ်တံဆိပ် ဖြစ်သော OPPO သည် ပိုမိုကြည်လင်ပြတ်သားသော မြင်ကွင်းရိုက်ချက် လုပ်ဆောင်မှုများ ပါဝင်လာမည့် စျေးနှုန်းတူ ဖုန်းများထဲတွင် pixel အမြင့်ဆုံး 44MP front camera နှင့် လျင်မြန်သောအားသွင်းနှုန်း VOOC3.0/20Wတို့ ပါ၀င်သောReno3 နှင့် ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး 20X Zoom Quad Camera နင့်44MP+2MP Dual Punch-hole၊ 64MP Quad Camera တို့ ပါ၀င်သော Reno3 Pro စမတ်ဖုန်း
မြင့်မားတဲ့နောက်ထပ်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် realme ရဲ့ခြေလှမ်းသစ်တစ်ရပ်လား?
TripleCamera GameMonster realme C3 ကို ဈေးကွက်တွင် လက်ဆောင်များနှင့်အတူ ဝယ်ယူနိုင်ပြီး
TripleCamera GameMonster realme C3 ကို ဈေးကွက်တွင် လက်ဆောင်များနှင့်အတူ ဝယ်ယူနိုင်ပြီး ဈေးနှုန်း ၂သိန်းအောက်မှာ PUBG ဂိမ်းကို HD (High Frame Rate) ဖြင့် ကစားနိုင်သည့် Budget King ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လာခဲ့
Chang ဘီယာ ပရိသတ်တို့ရေ၊ ဘီယာသောက်ရင်း ကား နဲ့ iPhone 11 တွေ ရနိုင်မယ့်အခွင့်အရေး လာပြီနော်
ဘီယာဘူးလေး ဖောက်မသောက်ခင် ရင်ခုန်ရမှာပေါ့။ Chang သံဘူးရဲ့ ကိုယ်ထည်၊ ပုလင်း နဲ့ စက္ကူဘူးတွေပေါ်က လေဘယ်ကို သေချာခွာကြည့်ပါဗျို့။ ကံကောင်းရင် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဘီယာလေးလဲသောက်ရင်း KIA sportage ကားတစ်စီးတောင် ကံထူးသွားနိုင်ပါတယ်။ ကား ပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ iPhone11 လည်း ၉ လုံးအထိ ပါပါတယ်။
" ရွှေတစ်ကျပ်သားဆုရရှိမည့် ဆောင်ပုဒ်ပြိုင်ပွဲ"
သင်က တီဗွီကြော်ငြာတွေနဲ့ ရင်းနှီးခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် "လပ်ကီးရတနာ စိန်ရွှေရတနာဆိုင်" နှင့် တွဲဖတ်အသုံးပြုရန် မြန်မာစကားလုံး ၈ လုံး ပါရှိသော ဆောင်ပုဒ်အား အောက်ပါလင့်ခ်တွင် ပါရှိသော လပ်ကီးရတနာ စိန်ရွှေရတနာဆိုင် စာမျက်နှာရှိ web form တွင် ဖြည့်သွင်းရေးသားပြီး "ရွှေတစ်ကျပ်သား" ရရှိမည့်အခွင့်အရေးကို ရယူလိုက်ပါ။